Hamehana ara-pahasalamana :: Mijanona ao anatin’ny fihibohana ny faritra Analamanga • AoRaha
Hamehana ara-pahasalamana Mijanona ao anatin’ny fihibohana ny faritra Analamanga
Notapahina nandritra ny Filankevitry ny minisitra notanterahina tamin’ny sabotsy 25 jolay 2020 lasa teo indray fa « hitohy mandritra ny dimy ambin’ny folo andro ny fahamehana ara-pahasalamana eto Madagasikara ». Taorian’ny fihaonana teo amin’ny praiminisitra Ntsay Christian sy ireo lehibena andrimpanjakana hatrany no nandraisana an’io fanapahan-kevitra io.
Fanimpolony nanomboka tamin’ny 21 marsa 2020 izao no nampiharana an’ity fepetra manokana noho ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 eto amintsika ity. Mitohy, araka izany, ny fihibohana ho an’ny faritra Analamanga saingy misy kosa ireo fepetra nohalefahana. « Haharitra dimy ambin’ny folo andro ny fihibohana saingy hatramin’ny 1 ora tolakandro ny fivezivezena », hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian, lehiben’ny governemanta.
Isan’ireo fepetra vaovao napetraka ihany koa ny « fahafahan’ny mpitondra môtô mitondra olona iray hafa, raha fianakaviana izy ». Hisy ny fitakiana taratasy fanamarinana. Toy izany ihany koa ny fahafahan’ireo toeram-pisakafoana misokatra hatramin’ny 1 ora tolakandro.
Voalazan’ny fepetra novakian’ny Praiminisitra ihany koa « ny fahafahan’ireo orinasa tsy miankina rehetra misokatra raha afaka misahana ny fitaterana ireo mpiasany sy ny fanajana ny fepetra rehetra hoentina misoroka ny fiparitahan’ny valanaretina ».
Nohalefahana kosa ny fepetra ampiharina any Toamasina I ; Toamasina II, Moramanga ary Fenoarivo Atsinanana. Noferana hatramin’ny 5 ora hariva ny fahafahana miasa, ka amin’ny 7 ora hariva ny fiafaran’ny fitaterambahoaka. « Hitovian’ireto distrika ireto amin’Analamanga kosa ny mbola tsy fahafahan’ny zotra nasionaly miasa amin’ny fitateram-bahoaka », hoy hatrany izy.
Ho an’ny faritra hafa indray dia tsy maintsy misy ny fifampidinihana amin’ny Ivontoeram-pibaikoana na ny CCO amin’ny fampiharana ny fepetra. Isan’ireny ny fampiatoana ny fampianarana, fandaminana ny tsena sy ny fampiharana ny tsy fahafahana mivezivezy amin’ny alina.
Nambarany fa « nahatsara an’Analamanga ny nidirana tao anatin’ny fihibohana tao anatin’izay telo herinandro izay ». « Raha ny tomban’ezaka tao anatin’ny telo herinandro ho an’Analamanga dia azo heverina fa miroso any amin’ny fifehezana ny valanaretina isika », hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian, lehiben’ny governemanta. Nambarany mihitsy fa tsy tafahoatra ny telonjato fa latsak’izany ny salan’isan’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina. Toy izany ihany koa ny sitrana, tafakatra avo roa heny tamin’ny herinandro fahatelo, raha roanjato sy arivo izany tamin’ny herinandro voalohany.
Fitantanana isam-paritra :: Raikitra ny fifaninanana masina eo amin’ireo governora
Fodiamandrina mpanentana :: Nindaosin’ny fahafatesana i Dany Rabemananjara